Ukubukela iApple kunceda ukuhlangula amaxhoba eNgozini yeTrafiki | IPhone iindaba
Enkosi kwisaziso esingxamisekileyo sakho Apple Watch, Ipolisa laseMelika elalifumene ingozi yemoto emangalisayo laye lahlangulwa ngexesha laza lasindisa ubomi balo. Olu hlobo lweendaba ngokuqinisekileyo liyanelisa uTim Cook kunye neqela elijongene noyilo lweApple Watch.
Isikhangeli sokuwa esidibanisa iApple Watch, ayisebenzi kuphela ukuba umsebenzisi oyinxibileyo uwa phantsi. Uyakwenza njalo ukuba ubona intshukumo engaqhelekanga, efana ne Impembelelo yengozi yemoto. Kulungile ukwazi, ngaphandle kwamathandabuzo.
Ngebali esiza kulibalisa ngokulandelayo, kucacile ukuba isixhobo sokuwa okubandakanya iApple Watch, inokulumkisa iinkonzo zongxamiseko ukuba ibhaqa intshukumo engaqhelekanga enje ngengozi yezithuthi.
Emva kwengozi, iApple Watch yazisa ngongxamiseko
Ngokutsho Chaza uthungelwano lweendaba lwaseNyakatho Melika i-KY3, usekela-sheriff wase-Missouri Chasady botteronUnombulelo kakhulu kwiApple Watch yakhe yokulumkisa iinkonzo zikaxakeka ngemini awayesengozini yemoto.
Kwakungo-Agasti wokugqibela we-10. Wayeqhuba ekhaya evela emsebenzini kwimoto yakhe yokuhambahamba xa waquleka xa eqhuba, kwaye wabaleka endleleni, ebetha imoto yakhe ngocingo. Impembelelo yayinkulu ngokwaneleyo ukuba ibangele umtshini wokuwa kwi-Apple Watch awayeyinxibile, kwaye kuba uBotteron wayengazi, wazise iinkonzo zikaxakeka.
Kungekudala emva koko, bavela kwindawo yengozi, kwaye amapolisa ahlaselweyo akhutshwa ngehelikopta. Wasindiswa ngexesha kwaye kungoku nje uyachacha ekonzakaleni emva kwempembelelo.
Abasebenzisi be-Apple Watch kufuneka bakhunjuzwe ukuba ngokungagqibekanga ukubonwa kwe-Apple Watch kwenziwa kuphela kubasebenzisi abangaphezu kwama-65. Ukuba ungaphantsi kwelo xesha, ungayenza ngesandla kwi-Watch application kwi-iPhone yakho, kwicandelo "le-SOS Emergency".
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Apple Watch » I-Apple Watch inceda ukuhlangula ixhoba lengozi yezithuthi
Uyidlala njani iSuper Mario 64 yasimahla kwi-iPhone yethu nakwi-iPad